တူးဖော်ခြင်းနှင့် reaming တို့၏ခြားနားချက်ကဘာလဲ။ - Mibond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / တူးဖော်ခြင်းနှင့် reaming တို့၏ခြားနားချက်ကဘာလဲ။
တူးဖော်ခြင်းနှင့် reaming တို့၏ခြားနားချက်ကဘာလဲ။
views:100 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-08-26 မူလ:ဆိုက်ကို
မင်းသိလားတူးဖော်ခြင်းအကြားခြားနားချက်နှင့်reaming? သူတို့နှစ် ဦး စလုံးအပြောင်းအလဲနဲ့နည်းလမ်းတွေဖြစ်ကြသည်လိုအပ်ပါတယ်အသေးစားပါဝါကိရိယာများ,ကဲ့သို့လက်ကိုင်ကိရိယာများတူးဖော်ခြင်းနှင့်အတူလက်ကိုင်ကိရိယာများ, Rotary Power Toolst ကို tမင်းကျွန်တော်တို့အကြောင်းပြောဆိုပါလိမ့်မယ်သူတို့ကို။
ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော, dRilling သည်အစိုင်အခဲပစ္စည်းများရှိတွင်းများရှိတွင်းတွင်း၏ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးအပေါက်၏အချင်းသည် 80 မီလီမီတာအောက်သာရှိသည်။ တွင်းတူးရန်နည်းလမ်းနှစ်နည်းရှိသည်,တစ်ခုမှာလေ့ကျင့်ခန်းလှည့်သည်ဖြင့်သေးငယ်တဲ့ rotary ကိရိယာများ,နှင့်အခြားအနေဖြင့် fornepiece လည်ပတ်ဖြစ်ပါတယ်ဖြင့်လက်ကိုင်လျှပ်စစ်ကိရိယာများ.အထက်ပါတူးဖော်နည်းစနစ်များကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အမှားများမှာလည်းမတူပါ။ Drill Bit Rotat နှင့်အတူတူးဖော်နည်းလမ်း၌တည်၏ingဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်း၏အချိုးမညီမှုကြောင့်လေ့ကျင့်ခန်းနည်းသောကြောင့်,it ကိုဖြောင့်မဟုတ်ပေမယ့်အချင်းအပေါက်၏အခြေခံအားဖြင့်မပြောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်။ အလိုတော်ဟိတ်,တူးဖော်ရေးနည်းလမ်း၌တည်၏workpiece လည်ပတ်၏ဆန့်ကျင်ဘက်။အပေြာင်း ဒါတွင်းတူးခြင်းလှျပ်စစ်ဓါတ်ကိရိယာများcommonly အသုံးပြုသော twist လေ့ကျင့်ခန်းများ, အလယ်ဗဟိုလေ့ကျင့်ခန်းများ, နက်ရှိုင်းစွာပါဝင်သည် အပေါက်လေ့ကျင့်ခန်း စသည်တို့သူတို့ထဲတွင်လှည့်ကွက်လေ့ကျင့်ခန်းပါဝါ tool ကိုမကြာခဏအသုံးပြုခံ့လူတွေက.ဒါပေါ့,twisting -bits နှင့်အတူ Rotary Power Tool ကိုတူညီတဲ့ function ကိုရှိပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအခက်အခဲများကြောင့်လေ့ကျင့်ခန်းအနည်းငယ်၏ကွေးခြင်းနှင့်အဓိကတင်းကျပ်မှုနည်းပါးခြင်းနှင့်ဗဟိုပြုခြင်းသည်မကောင်းပါ,ထိုအရာတခုတည်းသော, တဉီးတည်းသောရောက်ရှိIT13 ~ IT11.Thentသူကကြမ်းတမ်းတဲ့မျက်နှာပြင်လည်းကြီးမားတယ်, RA ဟာယေဘုယျအားဖြင့် 50 ~ 12.5μmဖြစ်ပါတယ်။ ခတူးစင်ခြင်း၏သတ္တုဖယ်ရှားရေးဖယ်ရှားရေးနှုန်းကြီးမားပြီးဖြတ်တောက်ခြင်းသည်မြင့်မားသည်။ဒါကိုငါတို့သိတယ်Rilling သည်အဓိကအားဖြင့်အရည်အသွေးနိမ့်သောလိုအပ်ချက်များနှင့်ရေနံတွင်းများနှင့်ရေနံတွင်းများကဲ့သို့သောအရည်အသွေးနိမ့်လိုအပ်ချက်များကိုပြုလုပ်ရန်အဓိကအားဖြင့်အဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။ မြင့်မားသောစက်တိကျမှုနှင့်မျက်နှာပြင်အရည်အသွေးလိုအပ်သည့်အပေါက်များသည်နောက်ဆက်တွဲအပြောင်းအလဲအတွက်ပျင်းစရာကောင်းခြင်း, ပျင်းစရာကောင်းသည့်သို့မဟုတ်ကြိတ်ခြင်းဖြင့်အောင်မြင်သင့်သည်။
Reaming ကတစ် ဦး ကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်ပါတယ်deaming လေ့ကျင့်ခန်းပါဝါ tool ကိုတူးဖော်ခြင်း, ပစ်ချခြင်းသို့မဟုတ်ဖြန့်ချိခြင်းများကိုချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်အပေါက်၏လုပ်ဆောင်မှုအရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေရန်အပေါက်တစ်ပေါက်ကိုထပ်မံပြုလုပ်ရန်။ အဆိုပါ creaming ဖြစ်စဉ်ကိုမပြီးစီးမီကြိုတင်ထုတ်ယူခြင်းအဖြစ် pre-process ကိုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒါတွင်းတူးခြင်းအပေါက်, ဒါမှမဟုတ်အဖြစ်fလျော့နည်းတောင်းဆိုသောတွင်းများ၏ inal ၏ inaling ။ Reamers များသည်လိမ်လည်လှည့်ကွက်များနှင့်ဆင်တူသော်လည်းအံသွားများနှင့်စို့မပါပါ။
တူးခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် Reaming သည်အောက်ပါလက္ခဏာများရှိသည်။
(1) Reaming Drill တွင်သွားအမြောက်အများရှိသည်အရာများသောအားဖြင့်ရှိပါတယ်3-8 အံသွား, ကောင်းသောလမ်းညွှန်မှုနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းအတော်လေးတည်ငြိမ်သည်.
(2) Reaming Drill တွင်စိုင်းအစွန်းမရှိပါ, ဖြတ်တောက်ခြင်းအခြေအနေများသည်ကောင်းသည်.
(3) စက်ပစ္စည်းထောက်ပံ့မှုသည်သေးငယ်သော်လည်းချစ်ပ်အိတ်ဆောင်ကိုရေတိမ်ပိုင်းကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီးလေ့ကျင့်ခန်းကိုပိုမိုထူထပ်စေပြီး, Reaming ၏တိကျမှန်ကန်မှုသည်ယေဘုယျအားဖြင့် IT11 ~ IT10 နှင့်မျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်းသော RA သည် 12.5 ~ 6.3 ဖြစ်သည်။ Reaming သည်အချင်းနှင့်အချင်းထက်နည်းသောအပေါက်များကိုအသုံးပြုလေ့ရှိသည်Ф100mm ။ ပိုကြီးတဲ့အချင်းနှင့်အတူအပေါက်တစ်ပေါက်တူးတဲ့အခါ (d≥30mm)တစ် ဦး အားဖြင့်လက်ပါဝါ tool ကို,သေးငယ်သောလေ့ကျင့်ခန်းအနည်းငယ်ကိုမကြာခဏအပေါက်ကိုကြိုတင်တူးရန်အသုံးပြုသည်။ ထို့နောက်အပေါက်၏အရည်အသွေးနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေရန်အပေါက်ကို rereaming creaming drill ကိုအသုံးပြုသည်။
အသေးစားပါဝါကိရိယာများ တူးဖော်ခြင်းနှင့်အတူလက်ကိုင်ကိရိယာများ Rotary Power Tools သေးငယ်တဲ့ rotary tools တွေကို လက်ကိုင်လျှပ်စစ်ကိရိယာများ twisting -bits နှင့်အတူ Rotary Power Tool ကို လက်ပါဝါ tool ကို လေ့ကျင့်ခန်း power tool ကို reaming လျှပ်စစ်ကိရိယာများတူးဖော်ခြင်း လှည့်ကွက်လေ့ကျင့်ခန်းပါဝါ tool ကို